လောကမှာမျှော်လင့်ခြင်းကုန်ခမ်းနေတဲ့သူတွေ၊စိတ်ဓါတ်ကျနေသူတွေအများအပြားရှိနေပါတယ်။ ထိုသူတွေအထဲမှာ သခင်ဘုရားကိုယုံကြည်ပြီး နောက်တော်လိုက်ခဲ့သူတွေလည်းရှိနေတတ်တယ်။ လူ့ဘဝဆိုတာမမျှော်လင့်ထား တာတွေတွေ့ကြုံနေတတ်ပြီး၊လူတိုင်းလိုလိုထွက်ပေါက်ကိုမျှော်လင့်မိတာတော့အမှန်ပါ။ ယေရှုဘုရားဟာ ထိုမျှော်လင့်ရာမဲ့နေတဲ့လူသားတွေကို ကူညီမစဖို့ဤလောကကိုဆင်းကြွလာခဲ့တာပါ။
သူ့ရဲ့အမှုဆောင်ခြင်းတွေမှာ နာသောသူ၊နတ်ဆိုးချည်နှောင်သောသူ၊နူသောသူ၊မျက်စိကန်းသူတွေနဲ့ ဆွံ့အနားမကြားအပြင် ခြေလက်သေနေသူ..နောက်ဆုံးသေနေသူတို့ပင်သေခြင်းမှထမြောက်ကျန်းမာခြင်းသို့ရောက်ပါတယ်။
ဘုရားသခင်ဟာ လူအပေါင်းကိုကျေးဇူးပြုနေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ သူများတွေပဲကျန်းမာနေပြီး ကိုယ်ကျတော့ဘာလို့အနာမပျောက်ရသလဲ..သူတို့ကျတော့နိမိတ်လက္ခဏာတွေမြင်နေရပြီး ကိုယ့်ကျမှ ဘာလို့ ထိုးဖောက်မှုတွေမရသေးတာလဲ။ ငါ့အလှည့်ဘယ်တော့လဲ? သခင်ဘုရားငါ့ကိုဘယ်အချိန်မှာ အကြည့်အရှုကြွလာမလဲ။ ငါဘယ်တော့လွတ်မြောက်မလဲလို့ မေးရင်း..စောင့်ရင်း.မျှော်နေရင်းနဲ့ ကိုယ့်အလှည့်ရောက် မလာ တဲ့အခါ စိတ်ဓါတ်ကျလွန်းလို့ သခင့်ကိုမေးခွန်းထုတ်ရတဲ့အထိ..သံသယတွေတောင်ဖြစ်လာခဲ့ရတဲ့အထိဖြစ်နေတဲ့သူတွေရှိမယ်။
သခင့်ကိုကောင်းစွာသိကျွမ်းရင်းနှီးခဲ့ပါလျက်..နှစ်ခြင်းပေးခဲ့သူ..ခြေနင်းကြိုးပင်မဖြည်ထိုက်သူလို့ မိမိကိုယ်ကို သခင့်ရဲ့ကျွန်ပင်မဖြစ်ထိုက်ပါလို့ပြောထုတ်ခဲ့တဲ့ ဆွေမျိုးရင်းချာထဲကလူ နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်ပင်လျှင်အဲလို အခြေ အနေမျိုးရောက်တဲ့အထိ ကြုံတွေ့ခံစားရတယ်။ဖွင့်ပြချက်ပေါင်းများစွာရခဲ့ပြီး သခင့်ကိုကောင်းစွာသိကျွမ်းရင်းနှီးအစေခံခဲ့ပါလျက် လူများစွာအတွက် သခင့်အသုံးတော်ခံတစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့ပြီးမှ ဖြောင့်မတ်ခြင်း
တရားကြောင့်ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခခံရတဲ့အခါ သခင်ဘုရားအကြည့်အရှုကြွမလာလို့ စိတ်ပျက်စွာမေးခွန်းထုတ်မိခဲ့တယ်..ကိုယ်တော်ကမြင်သမျှကြားသမျှပြန်ပြောလိုက် ပါတဲ့..နောက်ဆုံးတစ်ခွန်းပဲမှာလိုက်တယ် "ငါ့ကြောင့်စိတ် မပျက်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏"တဲ့ တစ်ခါတစ်လေမှာ သင်စိတ်ဓါတ်ကျနိုင်စရာတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သခင်ကလွဲ၍မျှော်လင့်စရာမရှိပါ။ကိုယ်တော်ကလည်းသင့်ကိုပြောနေပါတယ်..။ငါ့ကြောင့်စိတ်မပျက်သောသူသည် မင်္ဂလာရှိ၏" ဖတ်ရန်။ ။ လုကာရ:၂၀-၂၃
By Rev. Mang Uap (June 28, 2016)